Tilmaamo loogu talagalay dadka gurigayaha ku leh carruurta dhigata dugsiga barbaarinta ama iskuulka in loo xirays sababo la xiriisa cudurka Coronaviruset - Rädda Barnen
Somaliska - Tips till dig som är hemma
Tilmaamo loogu talagalay dadka gurigayaha ku leh carruurta dhigata dugsiga barbaarinta ama iskuulka in loo xirays sababo la xiriisa cudurka Coronaviruset
War bixin loogu tala galay waalidka guriga la jooga ilmo iskuulka ama xanaannada looga xiray faruska corona dartii
Xusuusnow howlihii nolol maalmeedka ey xanaannooyinka iyo iskuulladu ku hagi jireen ilamaha. Isku day inaad ilmaha dibadda u saarto intii suurtagal ah, matalan duurka iyo banaannada. Ka caawi ilmuhu iney dhaqdhaqaaqaan iyo howlo ey ku nasteexaan
Qaado markiiba hal asbuuc ka tallaabo qaad waxa aad hubto. Guud ahaan ilmuhu way ku fiican yihiin xaaladda taagan.
Guriga uga samee nidaam joogto ah. How ogolaan caruuta iney maalinta iyo habeenka is daba mariyaan.
Waalid ahaan, waa muhiim inaad adigu la xiriirto iskuulka si aad u yareeyso welwelka ilmaha isla markaana uga jawaabo su’aallaha ey ka qabaan howlaha iyo shahaadada . Waa muhiin inaad masuuliyad ka qaado sidii aad ilmaha uga caawin lahayd howlaha iskuulka ee guriga ay ku sameeyneyaan.
U sharrax ilmaha sababta loo xidhay xanaannada iyo iskuulka, oo ah si loo yareeyo faafidda cudurka ee aanay ahayn khatar inay ilmaha ku tahay fasalka iyo bayada qaarkeed oo la joogo. Hadii kale waxay ilmuhu u macneeysanayaan si gaar ah oo ku kodhineeysa welwelka mustaqbalka dhow iyo midka fog
Ka fikir in khilaafka reerku bato kolka nolol maalmeedka wax laga bedelo. Ka akhriso warar dheeraad ah hagaha Waalidnimo Ammaan ah, si aad uga barato sida aad ku noqon karto waalid ammaan ah.
Sidan ayaad cunuggaaga ugala hadli kartaa fayruska Corona
Somaliska: Waalidnimada sugan
Ladda ned handboken på somaliska.